Jiolahy – Midi Madagasikara
Ambatomena : Frantsay mpiasan’ny ambasady voatsatoka antsy sy voaendaka
Redaction Midi Madagasikara 18 avril 2014 Ambatomena, Analakely, Frantsay, hopitaly, Jiolahy, Tsaralalàna
Valizy diplomatika no lasan’ny olon-dratsy. Antontan-taratasy maro momba ny asa no tao anatiny, raha araka ny fantatra. Voatery nentina teny amin’ny hopitaly ny naratra. Tokony ho tamin’ny valo ora alina teo, afak’omaly, no nisy nanendaka ny lehilahy iray, teratany frantsay, izay miasa eo anivon’ny masoivoho frantsay. Nisy roalahy nanaraka izy ary rehefa dify tetsy ambanimbany,…